M. Mustaf iyo Jawar oo Diridhaba kuwajahan xili Oromodu dil & Af duub kagaysatay Tuli Guled. | ogaden24
M. Mustaf iyo Jawar oo Diridhaba kuwajahan xili Oromodu dil & Af duub kagaysatay Tuli Guled.
Sep 14, 2018 - Aragtiyood
Maleeshiyada Qiirooga oo Garab kahelaya maleeshiyada mamulka Oromada ee Liyuu Hailka ayaa maalinimadii shalay weerar Fulaynima ah kuqaaday deegaanka Geed Caano oo Hoostaga degmada Tuli Guuleed, waxayna Halkaasi kudileen 2-muwaadin waxaana dhaawac ah 3-kale Halka ay Af-duubteen 5-ruux oo kale.
Maleeshiyada mamulka Oromada ayaa sii Joogtaynaysa xasuuqa bahal-nimada ah ee ay kuhayso shacabka aan Hubaysnayn ee Somaaliyeed, kadib markii ay waayeen cid kula xisaabtanta fal dambiyeedyada foosha xun ee kuhayaan dadka maxasta iyo Birmagaydada ah.
Hadaba iyada oo wali ay banaanka Yaalaan maydadkii sida Kibirka ah ay shalay u dileen maleeshiyada Oromadu sidoo kalana aan Geeri iyo Nolol midna lagu Ogayn dadkii kale ee ay ka Af-duubteen deegaanka Geed Caano, ayaa waxaa soo baxay in madaxwayne Mustaf iyo cunsuriga Jawaar lagu magacaabo ay kusoo wajahan yihiin magalada Diridhaba.
Warkani oo Ogaden24 uu soo Gaadhsiiyay muwaadin kusugan magalada Addis ababa oo lasocda xogta madaxwayne Mustaf, ayaa hadii uu xaqiiqa noqdo waxaa uu meel kadhac kunoqonaya Haykalka dawladnimo ee Somaalida iyo sharafka madaxwaynaha.
Madaxwayne Mustaf waa Hogaamiyaha Ummad kabadan 8-milyan waxaana masuuliyadi kasaaran tahay ilaalinta sharafka iyo Qiyamka Ummadaasi leedahay, mana Jirto sabab uu isula simo shakhsi aanay jirin wax xil ah oo uu kahayo mamulada Addis ababa iyo kan Oromada, bal e ay kucadahay abaabulida Fal-dambiyeedyo lagu xasuuqay shacab badan oo Somaaliyeed.
Madaxwayne Mustaf waa inuu xiisada Labada bulsho kala xaalaa Hogaanka dhigiisa ah ee mamulka Oromada waana in Labada dhinac kudadaalaan sidii loo xakamayn lahaa weerarada lagu-hayo shacabka Somaaliyed ee kudhaqan deegaamada dhaca xadka Labada bulsho iyo kuwa kunool Gudaha dhulka Oromada.